Xildhibaannad sheegtay inuu Maamulka Jubbaland caburiyo shacabka – Kalfadhi
Isha Sawirka: Dalsan
Xildhibaan Qadiijo Cali Aadan (Kuweyd), oo ka tirsan Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Jubbaland, ayaa u sheegtay Kalfadhi iney uga dhamaatay iney dib ugu laabato, uguna noolaato magaalada Kismaayo ee Xarunta Ku-meel-gaarka Jubbaland, “inta uu Madaxweyne ka yahay” bey tiri “Axmed Maxamed Islaan”.
Waxay sheegtay in ay Kismaayo tahay meel uusan qofku ku muujin karin ra’yigiisa, oo uu ku muteysanayo ciqaab uga imaaneysa Xukumadda Jubbaland, sida ay hadalka u dhigtay. “Aniga Kismaayo waa iiga dhamaatay; kuma laaban karo ilaa hogaanka wax iska badalo” ayey Kuweyd ku tiri Kalfadhi.
Arrintan ayaa timid kadib markii ay Xildhibaannaddu ra’yigeeda ku diiday wax-ka-beddel lagu sameeyey Hindisaha Xeerka Guddiga Xudduudaha Jubbaland, oo ay Xukumaddu u gudbisay Baarlamaanka, kaas oo ay markii hore ku dhigeyd inuu Guddigu la shaqeynayo Guddiga Xuduudaha Federaalka, laakiin hadda laga saaray qodobkaas, waana sababta ay Kuweyd uga hor timid hindisahaas, sida ay u sheegtay Kalfadhi.
“Waan ka doodnay xeerka aniga iyo Xildhibaano kale. Marka, aniga dadkeygii ayaan ka joogi waayay Kismaayo oo gaarigeygii qaatay, iiguna hanjabay iney idili doonaan, halka Xildhibaannada kale ay garab ka heleen dadkooda” ayey tiri Xildhibaan Qadiijo Kuweyd. “Annaga, waxaan ku dhaqanaa Dastuurka Jubbaland, oo aan xaq ahayn laakiin noola sheegay inuu xal yahay. Dastuurkii xalka nagula sheegay ayaan dhib kala kulanay” ayey raacisay hadalkeeda.
Xildhibaannaddu waxay ammaantay ammaanka magaalada Kismaayo, waxayse tilmaantay in Xuriyadda Hadalka Kismaayo ay halis gashay. “Kismaayo waxaa ka jira amni, wax dhib ah kama taagna, laakiin dadka waa cabursan yihiin; cid hadli karta ma jirto” ayey Qadiija Kuweyd ku tiri Kalfadhi. “Qofkii raba inuu ka hadlo xaalka Jubbaland waa inuu marka hore ka baxaa deegaannada Maamulkaas” ayey raacisay hadalkeeda.
Waxay sheegtay ineysan Kismaayo ku noolaan karin cid rabta iney sheegto aragti ka duwan tan uu qabo Maamulka Madaxweyne Axmed Madoobe. “Kismaayo waxaa jooga oo kaliya macalim iyo ardaydiisa oo wixii loo keeno qaata, qofkii ka hadlana waa dambiile” ayey tiri Xildhibaannaddu. “Aniga, liiska Xildhibaannada waa iga saareyn, laakiin ilaahey idinkiis waan ku laaban doonaa Kismaayo, kursigeygana waan soo ceshan doonaa” ayey Xildhibaannad Qadiija Kuweyd ku sheegtay wareysi ay siisay Kalfadhi.
Guddiga Maaliyadda iyo Waasaaradda Maaliyadda oo ka wada hadlay Miisaaniyadaha 2018 iyo 2019